N'etiti ọkọchị na July-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
N'etiti ọkọchị na July
N'oge ọkọchị nke Julaị, site na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ, bọl nke anyanwụ na-eme ebere mejupụ ala ahụ dum. Anwụ na-acha n’okirikiri, ala dị ka nnukwute uzuoku na-ekpuchi, na-amachi. Ọbụna igwe ojii na mbara igwe enweghị ike iguzo, jiri nwayọ zoo.
Ihu igwe ahụ dị ọkụ nke na ikuku na-enweghị, ikuku ahụ dịkwa egwu yikọrọ. N'elu isi ya, enwere anwụ na-achasi ike, ma osisi ndị ahụ niile kwụ ọtọ ma dịkwa umengwụ.
N'oge a, na-anụ ọkụ n'obi maka mbata mmiri ozuzo, mmiri ozuzo a kwesịrị ịbụ ụdị obi. Mmiri ozuzo na-abịa n'ezie, ma ọ bụ mgbe obere égbè eluigwe na-agba ọsọ, dị ka njem ọsọ ọsọ, ma ọ bụ mkpu ole na ole nke oke ifufe. N'agbanyeghị ma a ga-ekpochapụ oge ọkọchị n'oge ọkọchị ma ọ bụ na agbanyeghị, mmiri ozuzo a nwere ike zụlite ụwa nke akpịrị na-akpọ nkụ, nnukwu mmiri na-awasa n'etiti ntụ, na-eme ka ájá dị, mana ọ na-enwe ọ joyụ.
Ka ọsụsọ niile na ọsụsọ na-ezu ike n'oge a, oge a bụ nke ndị na-eto eto. Ọsụsọ na-asọpụta bụ ụdị nkasi obi a na-apụghị ịkọwa akọwa, dị mma karịa mmetụta na-adịghị mma, nke nnyapade. Mgbe ọsụsọ ahụ gasịrị, nwee oge ezumike na-atọ ụtọ, ọrụ siri ike na iwe ihe ubi a na-akpọ ndụ, ụbọchị ọ bụla nwere owuwe ihe ubi, nke ahụ bụ ọnọdụ, bụ ịchụso.
Enweghi mmachi na July, enwere m mmasị n'ezoghị ọnụ nke July, ọtụtụ dị ka kachasị ọcha na July.
Previous: Jenny 'Ahụmịhe Ahụmịhe
Ọzọ: Adọkpụtagharị Adịlị na Wheel Spacer